ကလေးလှုပ်ခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ဘဝမှာ က​လေးလှုပ်​ခြင်းကန်​ခြင်းဟာ စိတ်​လှုပ်​ရှားစရာ အ​တွေ့အကြုံတစ်​ခုပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ က​လေး​လေးဟာ အ​မေ့သားအိမ်​ထဲမှာ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ကြီးထွား​နေပြီး မကြာခင်​မှာ မိဘနှစ်​ပါးရဲ့ ဘဝထဲကို ဝင်​​ရောက်​လာ​တော့မယ်​ဆိုတာ ပြသ​နေပါတယ်​။ ဒါ့အပြင်​ ဖခင်​အတွက်​လည်း က​လေးလှုပ်​တာကို စမ်းကြည့်​ကိုင်​ကြည့်​ပြီး က​လေး​လေးနဲ့ ဆက်​သွယ်​နိုင်​ပါတယ်​။ အ​ပျော်​​တွေကို ​ဝေမျှနိုင်​ပါတယ်​။
က​လေးလှုပ်​ခြင်းနဲ့ပတ်​သတ်​ပြီး စိတ်​လှုပ်​ရှားဖွယ်​ရာ အ​ချက်​များ
ဒီအချက်​​တွေကိုဖတ်​ကြည့်​ပြီး​နောက်​မှာ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ခြင်းဟာ အံ့ဖွယ်​အခြင်းအရာ တစ်​ရပ်​ဖြစ်​တယ်​ဆိုတာကို လက်​ခံလာမိမှာပါ။
၁။ က​လေးလှုပ်​ခြင်းဟာ က​လေး​လေးဟာ အ​မေ့ဗိုက်​ထဲ ကျန်းကျန်းမာမာကြီးထွား​နေတာကို ညွှန်​ပြ​နေပါတယ်​။
က​လေး​လူးတာ၊လိမ့်​တာ၊လှည့်​တာ၊ကန်​တာဟာ က​လေးကျန်းမာပြီး ​ကောင်း​ကောင်းလှုပ်​ရှား​နေနိုင်​တာကို ပြသပါတယ်​။ ဒါ့အပြင်​ က​လေး​ခြေ​တွေလက်​​တွေ ဆန့်​ထုတ်​လိုက်​တဲ့အခါတိုင်းမှာ လှပ်​ခနဲလှပ်​ခနဲ ခံစားချက်​မျိုးခံစားရမှာဖြစ်​ပါတယ်​။ ကိုယ်​ဝန့်​ရင့်​လာ​လေ က​လေးလှုပ်​ရှားမှု​တွေပိုစိပ်​လာပြီး ပိုထင်​ရှားလာမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။
၂။ အပြင်​ဘက်​ကလာတဲ့လှုံ့​ဆော်​မှု​တွေကို က​လေးပြန်​လှန်​ တုန့်​ပြန်​တဲ့အ​နေနဲ့ လှုပ်​တာလည်းဖြစ်​ပါတယ်​။
သ​န္ဓေသား​လေးရဲ့ ပတ်​ဝန်းကျင်​မှာဖြစ်​​ပေါ်လာတဲ့ ​ပြောင်းလဲမှု​တွေကို တုန့်​ပြန်​တဲ့အ​နေနဲ့ ကန်​တာဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​။ မိခင်​စားလိုက်​တဲ့အစာ၊ ပတ်​ဝန်းကျင်​ကဆူညံမှု​တွေ​ကြောင့်​ ကန်​တတ်​ပါတယ်​။
၃။ ​ဘေးတစ်​​စောင်းလှဲအိပ်​တဲ့အခါ က​လေးလှုပ်​တာပိုများလာပါတယ်​။
​ဘေး​စောင်းအိပ်​တဲ့အခါ က​လေးဆီကို အချင်းက​နေ ​သွေး​အသွားအလာပိုများလာပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​ က​လေးရဲ့ ပိုလှုပ်​ရှားလာတာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။
၄။ ကိုယ်​ဝန်​၁၈ပတ်​မှ ၂၅ပတ်​အတွင်း စလှုပ်​တတ်​ပါတယ်​။
သားဦးကိုယ်​ဝန်​​တွေမှာ ၂၅ပတ်​​လောက်​မှ သတိထားမိတတ်ပြီး ကျန်​ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​တွေမှာ​တော့ ၁၈ပတ်​​လောက်​ကတည်းက လှုပ်​တတ်​ပါတယ်​။
၅။ က​လေးလှုပ်​တဲ့အကြိမ်​အ​ရေအတွက်​ကို ​ရေတွက်​ထားသင့်​ပါတယ်​။
အစပိုင်းမှာ ​လေထသလား၊ က​လေးတကယ်​လှုပ်​တာလား မ​သေချာတတ်​​ပေမယ့်​ ​နောက်​ပိုင်းတစ်​ဖြည်းဖြည်းနဲ့ က​လေးဘယ်​အချိန်​မှာ ​အိပ်​တတ်​တယ်​၊ ဘယ်​အချိန်​မှာ နိုးတယ်​၊ ဘယ်​အချိန်​မှာ အလှုပ်​ရှားဆုံးဖြစ်​တယ်​၊ ဘယ်​လိုလုပ်​ရင်​ပိုလှုပ်​တယ်​ ဆိုတာကို​တောင်​ သိလာနိုင်​ပါတယ်​။
က​လေးရဲ့လှုပ်​ရှားမှု​တွေကို သတိထား​နေခြင်းဖြင့်​ က​လေးမှာပြဿ နာတစ်​စုံတစ်​ရာဖြစ်​လာတဲ့အခါ ချက်​ချင်းသိနိုင်​ပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​ ​နေ့တိုင်း​နေ့တိုင်း က​လေးကန်​တာ၊ လှည့်​တာ၊ တွန်းတာ​တွေကို ​သေချာမှတ်​သား​ရေတွက်​ထားသင့်​ပါတယ်​။ ဒီလို ​ရေတွက်​ထားခြင်းဖြင့်​ သ​န္ဓေသား​သေဆုံးခြင်းကို ကာကွယ်​နိုင်​တာ​ကြောင့်​ ကိုယ်​ဝန်​၂၈ပတ်​က​နေစပြီး ပုံမှန်​​ရေတွက်​ဖို့ အကြံပြုပါတယ်​။
၆။ က​လေးအလှုပ်​နည်းသွားခြင်းဟာ က​လေးမှာပြဿနာ တစ်​စုံတစ်​ရာရှိ​နေနိုင်​​ကြောင်းပြသပါတယ်​။
ကိုယ်​ဝန်​၂၈ပတ်​​ကျော်​လွန်​လာတဲ့အခါ ဆရာဝန်​က တစ်​​နေ့တာ က​လေးလှုပ်​ရှားမှု အ​ရေအတွက်​ကို မှတ်​သားထားခိုင်း​လေ့ရှိပါတယ်​။ ပုံမှန်​ ၂နာရီအတွင်း က​လေးလှုပ်တာ၁၀ကြိမ်​ ပြည့်​​လေ့ရှိပါတယ်​။ အကယ်​၍နည်း​နေပြီဆိုရင်​​တော့ ​အောက်​ပါ ပြဿနာ တစ်​ခုခုရှိ​နေနိုင်​ပါတယ်​။
မိခင်​မှာ စိတ်​ဖိစီးမှု သို့မဟုတ်​ အာဟာရ ချို့တဲ့မှုရှိ​နေခြင်း : မိခင်​ရဲ့ ကိုယ်​စိတ်​နှစ်​ပါး ကျန်းမာ​ရေးဟာ က​လေး​ပေါ်မှာ သက်​​ရောက်​မှု အများအပြားရှိနိုင်​ပါတယ်​။ အာဟာရမပြည့်​ဝတဲ့အခါ က​လေးရဲ့ ဦး​နှောက်​နဲ့အာရံ​ကြောဖွံဖြိုးမှု ​လျော့နည်းပြီး လှုပ်​ရှားမှုနည်းလာပါတယ်​။ က​လေးသိပ်​မလှုပ်​ဘူးလုိ့ ထင်​တဲ့အခါ ​ရေများများ​သောက်​ပြီး လမ်းထ​လျောက်​ကြည့်​လိုက်​ပါ။
အချင်းကွာခြင်း : အချင်းကွာတဲ့အခါ က​လေးဆီကို ​အောက်​ဆီဂျင်​နဲ့ ​သွေးအ​ရောက်​နည်းပြီး က​လေးဖွံ့ဖြိုးမှုကို အ​နှောင့်​အယှက်​ ဖြစ်​​စေပါတယ်​။
​ရေမြွာ​စော​ပေါက်​ခြင်း : ​ရေမြွာ​စော​ပေါက်​တဲ့အခါ ​ရေမြွာ​ရည်​ နည်းလာပြီး က​လေး​ကောင်း​ကောင်းမလှုပ်​ရှားနိုင်​တာ၊ ​အောက်​ဆီဂျင်​ဓာတ်​နည်းပါးလာတာမျိုး ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​။
က​လေး​အောက်​ဆီဂျင်​ဓာတ်​မလုံ​လောက်​ခြင်း : အချင်းကြိုးလိမ်​သွားခြင်း၊ ​ခေါက်​သွား​ခြင်း၊ ပုံပျက်​သွားခြင်းတို့​ကြောင့်​ က​လေးဆီ ​အောက်​ဆီဂျင်​ပြတ်​​တောက်​သွားတတ်​ပါတယ်​။
အာထရာ​စောင်းရိုက်​ခြင်းနဲ့ အခြားစမ်းသပ်​နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်​ က​လေးရဲ့ နှလုံးခုန်​နှုန်းနဲ့ အလှုပ်​နည်းရခြင်း အ​ကြောင်းအရင်းတို့ကို ရှာ​ဖွေနိုင်​ပါတယ်​။
၆။ ကိုယ်​ဝန်​ရင့်​ချိန်​မှာ က​လေးအလှုပ်​နည်းခြင်းကို​တော့ စိုးရိမ်​စရာမလိုအပ်​ပါဘူး။
​ ကိုယ်​ဝန်​ရင့်​လာတဲ့အခါ က​လေးဟာ မိနစ်​၂၀ မှ ၄၀ခန့်​ တစ်​ခါတ​ရံ မိနစ် ​၉၀ ခန့်​ထိ မလှုပ်​မရှားပဲ ​နေတတ်​ကြပါတယ်​။ က​လေးတစ်​ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတဲ့အခါ လှုပ်​ရှားရခက်​လာတတ်​ပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​ က​လေးအလှုပ်​နည်းသွားတဲ့အခါ မစိုးရိမ်​သွားပါနဲ့။ ဒါ​ပေမယ့်​ တစ်​ခါတစ်​ရံ နံရိုး​အောက်​မှာ စူးခနဲ ​အောင့်​​အောင့်​သွားတတ်​ပြီး မိနစ်​အတန်​ကြာ တစ်​ဆတ်​ဆတ်​နာ​နေတတ်​ပါတယ်​။
၇။ က​လေးလှုပ်​ရှားမှုဟာ က​လေး​မွေးလာတဲ့အခါ စိတ်​​နေစိတ်​ထားနဲ့ ဆက်​စပ်​မှုရှိ​နေနိုင်​ပါတယ်​။
​လေ့လာမှု​တွေအရ ဗိုက်​ထဲက က​လေးရဲ့လှုပ်​ရှားမှုပုံ​တွေဟာ က​လေးဘဝအစပိုင်းရဲ့ စိတ်​​နေစိတ်​ထားကို ​ဖြော်​ပ​နေနိုင်​တယ်​လို့ဆိုပါ့တယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ ဒီတစ်​ခုတည်းနဲ့​တော့ ဆုံးဖြတ်​လို့ မရပါဘူး။
၈။ က​လေးလှုပ်​ရှားမှုနဲ့ ပတ်​သတ်​ပြီး ဘယ်​အချိန်​မှာ စိုးရိမ်​သင့်​သလဲ?
ကိုယ်ဝန်လရင့်လာတဲ့အချိန်မှာ၂နာရီပြည့်​သည်​အထိ က​လေးလှုပ်​တာ ၁၀ကြိမ်​မပြည့်​တဲ့အခါ နာရီအနည်းငယ်​မျှ​စောင့်​ပြီး ​နောက်​တစ်​ခါ​ရေတွက်​ကြည့်​လိုက်​ပါ။ ​နောက်​တစ်​ခါမှာလည်း ၂နာရီအတွင်း ၁၀ကြိမ်​မပြည့်​ခဲ့ရင်​ နီးစပ်​ရာကျန်းမာ​ရေးဌာနကို ​သွားပါ။
ဒါ့အပြင် ဆူညံသံတွေကို ခါတိုင်းလိုမဟုတ်ဘဲ တုံ့ပြန်​မှု​လျော့နည်းလာခြင်း၊ ၂ရက်​ဆက်​တိုက်​ က​လေးလှုပ်​ရှားမှု တစ်​ဖြည်းဖြည်း ​လျော့နည်းလာခြင်းတို့ ကြုံရပါကလည်း ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ အမြန်ဆုံးသွားသင့်ပါတယ်။
၉။ က​လေးလှုပ်​​ရှားမှုနည်းလာတယ်လို့ထင်တဲ့အခါ အိမ်မှာဘာလုပ်ကြည့်သင့်သလဲ?
အ​အေးနဲ့ သ​ရေစာတစ်​ခုခု စားပြီး ​ခြေ​ထောက်​ကို အ​ပေါ်​မြှောက်​ပြီး ထိုင်​ပါ။ အချိုဓာတ်​နဲ့ အ​အေးဓာတ်​က က​လေးရဲ့ တုန့်​ပြန်​မှုကို ရရှိ​စေနိုင်​ပါတယ်​။
က​လေးဟာ လှုပ်​ခြင်း၊ ကန်​ခြင်း၊ တွန်းခြင်း၊ ပုတ်​ခြင်းစတဲ့နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တုန့်​ပြန်​ပါလိမ့်​မယ်​။